अन्डाको आयु कति ? - खबर मलाई
अन्डाको आयु कति ?
२५ बैशाख २०७६, बुधबार २५ बैशाख २०७६, बुधबार खबर मलाईLeaveaComment on अन्डाको आयु कति ?
मापदण्डविपरीतका अन्डा खाँदा अन्डाबाट लाग्ने विभिन्न रोग मानिसमा सर्न सक्ने उनको भनाइ छ । अन्डामा यी २५ थरीका एसपीएफ ९क्उभअषष्अ एबतजयनभल (चभभ) नभएका अन्डा मात्रै खान योग्य हुन्छन् । रातोपाटि
आईपीएल : साविक विजेतालाई हराउँदै मुम्बई फाइनलमा
सर्लाहीका एक दर्जनभन्दा बढी बस्ती डुबानमा
संसारकै कान्छो बन्दी : जसलाई १४ वर्षमै जेलमा थुनियो, १८ वर्षमा फाँसी सुनाइयो !